यि जवानले गृहका सह–सचिवको गाडी लक गर्न माथिको निर्देशन पर्खेनन् : जनताबाट स्यावासीको ओइरो « Janaboli
यि जवानले गृहका सह–सचिवको गाडी लक गर्न माथिको निर्देशन पर्खेनन् : जनताबाट स्यावासीको ओइरो
काठमाडौ । राजधानी काठमाडौको प्रमुख समस्या हो सडक ट्राफिक अस्तव्यस्त । यसलाई सहज बनाउँन नेपाल सरकारले विभिन्न नियम लागू गरेको छ । लागू भएका नियमको कार्यन्वय गर्न महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई दिएको छ । यसका लागि महाशाखाले आफ्ना जवान देखि अधिकृत, उच्च तहका अधिकारी सम्म सडकमा खटाउँछ । सडकमा खटिएका प्रहरी जवानले आज सबैको स्याबासी पाउने काम गरेका छन् । गृह मन्त्रालयका सह–सचिव रामकृष्ण सुवेदीले नियम बिपति गाडी राखे । नियम मिच्ने उक्त गाडीमा जवानले लक लगाएका छन् । अनाधिकृत रुपमा सिंहदरबारको पूर्वी गेट अगाडि पार्किङ गरेर राखेका वेला सरकारी नम्बर प्लेटको गाडीमा लक लगाइएको हो । सुवेदी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत हुन् ।
महाशाखाका प्रमुख वसन्त लामालाई आफूलाई घटनाबारे जानकारी आएको बताउँदै सोधपुछ भइरहेको बताए । उनले उक्त लक माथिको आदेश नपर्खि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको र गाडी गृहकै उच्च अधिकारीको परेकाले रिपोटिङ भने गरेका छन् । प्रहरीका अनुसार पार्किङ गर्न निषेध गरिएको ठाउँमा बा २ झ ३४६ नम्बरको गाडी राखेर सुवेदी खाना खान निस्एिका थिए । प्रत्यक्षदर्शीका यज्ञम्बर श्रेष्ठका अनुसार लक लगाएपछि कर्मचारीले ट्राफिक जवानलाई धम्क्याएका थिए ।
‘कानुन पालना गराउने निकायले कानुनको रखवाली गर्दै गरेका प्रहरी दाइलाई दवाब दिएर कारवाही फिर्ता गराउन खोज्ने ?’, श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन्, ‘त्यति मात्रै होइन, फोनमार्फत कुरा गराएर ती प्रहरीलाई नै तर्साउन खोज्ने ? भन्दै उनले पोष्ट गरेका छन् । उनले ती कर्मचारीको सरुवा गरिने आशंका गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘होसियार हामीले हेरी राखेका छौं ।’ त्यसपछि यो तस्वीर भाइरल भएको छ । यत्रतत्र सेयर भएको छ । दुनियाँले ती जवानलाई स्यावासी दिइरहेका छन् ।
कोरोना परीक्षण ३० प्रतिशत गलत नतिजा आएको खुलासा: अवस्था नेगेटिभ रिपोर्ट पोजेटिभ आए के हुन्छ ?
काठमाडौ । विश्वव्यापी संकटका रुपमा रहेको कोरोना भाइरसबारे थप नयाँ रहस्य खुल्न आएको छ ।
कोरोनासँग ल’ड्ने हो भने यसरी जीवनशैली सुधारेर प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाउँनुहोस्
काठमाडौ । कोरोना महामा’रीका कारण अहिले सिंगो विश्व समुदाय सं’कटमा देखिएको छ । हाम्रो शारीरिक
आज महापर्व रामनवमी, बिहानैदेखि यी कार्य गरे सु:ख र संबृद्धी
काठमाडौ । चैत्र शुक्ल नवमीका दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् रामचन्द्रको सम्झनामा मनाइने ‘रामनवमी’ पर्व आज
नेपालमा डिजेल/पेट्रोलको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च दरमा घट्यो
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले तेलको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च दरमा एकै पटक घटाएको छ